गाउँघरमा डाक्टर कहिले ?
सिंहदरबार केन्द्रित अधिकार गाउँमा पुग्दै छ भन्दै नेताले रटान लगाइरहेको पनि धेरै भइसक्यो । गाउँमा आधारभूत विकास निर्माणसँगै स्वास्थ्यका कुरा पनि व्यापकरुपमा उठेका थिए । अहिलेसम्म उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा
मुलुकका लागि युवापङ्क्ति अग्रसर होऔं
दलीय प्रजातान्त्रिक देशमा पदीय आकांक्षा भएका व्यक्ति मात्र भेटिनुमा दोष शीर्षस्थ नेता वा प्रमुख नेतृत्वलाई नै जान्छ । यसमा साँढेले गाई ओगटेझैँ ओगटेर बस्ने प्रमुख नेतृत्व नै बढी जिम्मेवार रहेको
उपचार गर्ने नाममा बिमा कम्पनीबाट ठगी
कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकार र इन्सुरेन्स कम्पनी मिलेर सर्वसाधारणको कोरोना बिमा गर्ने अवधारणा अगाडि सा¥यो । तर सरकारले पूरा रकम भुक्तानी नगरेको भनेर बिमक संघले बिमा स्थगित गरेको थियो
सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि सधैँको खेलबाड
हामीले दैनिक भान्सामा उपभोग गर्ने खाद्यान्नमा कत्तिको गुणस्तर छ त ? यो कुरामा कतिले गहन अध्ययन गर्नुभएको छ ? हामी नेपालीले दैनिक प्रयोग गर्ने भनेको तेल, दूध, बिस्कुट, चिया, मसला,
घरबेटीको शान र भाडावालको पीडा
आफ्नो जन्मथलो छोडेर परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न सर्वसाधारण काठमाडौं उपत्यकामा छिरेका हुन्छन् । उपत्यका छिरेर मात्र भएन, बस्ने बास पनि चाहियो । तपाईंहरु अधिकांशले उपत्यकाका घरहरु खालि भएकाले टुलेट भनेर
कानुन नबन्दा पठाओ र टुटलको ठगी
रातो प्लेटमा निजी सवारीसाधनहरु दर्ता भएका हुन्छन्, जसमा मोटरसाइकलदेखि लिएर चार पाड्ग्रे गाडी पनि पर्दछन् । त्यसअन्तर्गत टुटल र पठाओ पनि पर्दछ । निजी सवारीसाधनले पनि यात्रु बोकेर हिँडिरहेका छन्
आजभोलि प्रायः देशहरुमा दैवी प्रकोपहरुको फेसन चलेको छ । बाढी, पहिरो, डढेलो, आँधी, रोगको महामारीले गर्दा संसारमा मानिसहरु वाक्कदिक्क भएका छन् । यी कारणहरुले गर्दा मानिसहरु मानसिक तनावमा जाने र
हाम्रो देशमा जति पनि सरकारी, निजी बैंक र सहकारीहरु छन्, यी वित्तीय संस्थाहरुको एउटै महत्वपूर्ण उद्देश्य भनेको जनता ठग्ने हो । बैंक, फाइनान्सको जनता ठग्ने एउटै पोलिसी हो– सर्वसाधारणको पैसा
कति सरकारी कार्यालयहरुमा हामी सबैले नयाँ डोजरहरु थन्किरहेको देखेका छौं । ती डोजरहरु के कारणले थन्केका होलान् त ? त्यस्ता नयाँ डोजरहरु थन्किनुमा केही न केही रहस्य त होला ।
कुनै पनि महिलाको गर्भमा भ्रूणले बास लियो भने अस्पताल गएर चेकजाँच गराउन आवश्यक पर्छ । अस्पताल गएर चेकजाँच गराउँदा पनि राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्छ । कुनै पनि महिलाको गर्भमा बच्चा आउनु
सत्ता सुविधाका लागि मात्रै हो सरकार ?
हामीले हरेक सामान खरिद गरेबापत राज्यलाई राजस्व तिर्छौं । उद्योगपतिहरुले राज्यलाई अलिक धेरै राजस्व तिर्छन् । हामी सर्वसाधारणचाहिँ अलि कम राजस्व तिर्छौं तर सरकारले तोकेअनुसार राजस्वचाहिँ तिर्छौं नै । हरेक
गत वैशाख १३ गते काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सीडीओ मिलेर गरेको महत्वपूर्ण निर्णय १६ गतेबाट उपत्यकाको यी तीन जिल्लामा कोभिड–१९ नियन्त्रणको लागि निषेधाज्ञा गर्ने । यही निर्णयअनुसार सरकारले वैशाख १४
वि.सं. २०७८ वैशाख १२ गते यसै नेपाल समाचारपत्रमा राष्ट्रप्रति बफादार र समर्पित व्यक्तिको खोजी भन्ने मेरो रचना आयो । यस राष्ट्रमा राष्ट्रचिन्तकहरु देखेर नै मैले राष्ट्रचिन्तकको खोजी गरें । मैले
२०६८ सालदेखि सरकारले सुरु गरेको खुला दिसामुक्त मुलुक बनाउने योजना कहाँसम्म पुग्यो त ? अनि के कति घरमा शौचालय निर्माण भयो, के कति सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएर प्रयोगमा आए त
तीजमा दोहोरी गीत कि रत्यौली गीत ? जताततै यस्तै सुनिन्छ । तीजका गीत त बजारमा पाइँदैनन् । पछिल्लो समय बजारमा तीज गीतको नाममा बजिरहेका गीतले तीजको मर्म बोल्दैनन् । संस्कृति